Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya oo ka shiray horumarinta xiriirka labada dal | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya oo ka shiray horumarinta xiriirka...
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya oo ka shiray horumarinta xiriirka labada dal
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda F. Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad ayaa galabta magaalada Nairobi kulan kula qaatay dhiggiisa dalka Kenya Amino. iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka u dhaxeeya labada dal.
Si kastaba ha ahaatee kulankaasi ayaa muujinaya sida labada dowladood ee deriska ah wa Soomaaliya iyo Kenya ay uga go’antahay hagaajinta xiriirkooda. iyagoo iska kaashanaya dhinacyada ammaanka ganacsiga, socdaalka iyo arrimo kale oo muhiim u ah shucuubta labada dal.
Previous articleKulan Dadweyne Oo Looga Hadlayay Qatarta Xagjirnimada Oo Lagu Qabtay Wadajir
Next articleMadaxweynaha oo guddi xaqiiqo raadin ah u saaray shaqaaqo shalay ka dhacay Muqdisho